भाईरल आमाले किन राजु परियार संग गित गाईनन् ? राती यस्तो अबस्थामा फेला हेर्नुहोस – Tufan Media News
भाईरल आमाले किन राजु परियार संग गित गाईनन् ? राती यस्तो अबस्थामा फेला हेर्नुहोस
२६ पुष २०७७, आईतवार २०:११
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला एजेन्सी । मायामा सबै कुरा जायज हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण आइरिस जोन्स र माहम्मद अहमदको जोडीलाई लिन सकिन्छ । बेलायतमा बस्ने ८१ वर्षीया आइरिस जोन्सले ३६ बर्षे मोहम्मद अहमद इब्राहिमसँग केही समय अघि फेसबुकमा कुरा गर्न थालेका थिइन् । यी दुई बिच ४५ बर्षको अन्तर भए पनि, आज उनीहरू विवाह गरेका छन्। इजिप्टमा रहेका मोहम्मद हाल भिसा समस्याका कारण जोन्सबाट टाढा छन्।
आइरिस भन्छिन्, मेरो छोराले बुझिसक्यो कि यस सम्बन्धमा इमान्दारी छ र हामी एक अर्कालाई मन पराउँछौं। दुबैले इजिप्टमा विवाह गरेका छन् तर परम्परागत तरिकाले विवाह गर्नुको सट्टा यी व्यक्तिहरूले कागजमा हस्ताक्षर गरे र केएफसीमा उत्सव मनाउन गए